Wararka - Tianjin Cheng Yang Waxyaabaha Kulul ee Maqaarka Maqaarka Fibbaaska Dahaarka ah
Maro silikoon ah waxaa sidoo kale loo yaqaan 'gel silica gel', silica gel ka dib heerkulka sare ee vulcanization kulul oo lagu sameeyay aashitada iyo caabbinta alkali, iska caabinta abrasion, caabbinta heerkulka sare iyo hooseeya, caabbinta daxalka doorka waa nooc ka mid ah dalabyada dhirta kiimikada, saliidaha saliidda, dekedda iyo gaadiidka, baabuurta, caafimaadka, biyaha kulul ee warshadaha iyo tuubbada silikoonta quudinta, cuntada, iyo warshadaha kale, gaar ahaan nooc caag ah oo tayo sare leh oo silikoon ah maadada ceyriinka ah si ay ugu adkeysato cadaadiska sare ee tuubada silikoon heerkulka heerka sare leh.
Tuubbada silica ee silica ee cadaadiska badan leh ayaa ka kooban lakab caag ah oo gudaha ah, lakab xoojiya xarkaha fiberka iyo lakabka caagga ah ee dibadda. Lakabka caagga ah ee gudaha waa lakab gudaha ah, lakabka sare ee cinjirka ah waxaa ku duuban lakab xoojinaya lakab faybar ah.
Tuubbada cinjirka ah ee ka samaysan dharka leh silica gel waxay leedahay faa'iidooyinka nolosha muddada dheer iyo cadaadiska weyn. Waxay u adkeysan kartaa cadaadiska 1MPa-10MPa, taas oo 3-5 jeer ka sarreysa tuubbada caagga ah ee cadaadiska sare leh. Waxay leedahay faa'iidooyin muuqda oo ku saabsan ilaalinta deegaanka.
Mashiinka silica silica wuxuu ka samaysan yahay maro fiber dhalo ah sida dharka aasaasiga ah iyadoo la marinayo ama laysku daro. Waxay ka samaysan tahay heer-kul sare oo adkaysi u leh, maaddada xinjirowga iyo xoogga sare leh ee muraayadda muraayadda ah oo ay ka samaysan tahay caag silikooni ah oo calendering ama impregnating ah. Waa shey walxo cusub oo isku dhafan oo leh waxqabad sare iyo ISTICMAAL badan.
1. Nalalka korantada: Dharka silikoonku wuxuu leeyahay darajo heer sare oo dahaadhka korantada ah, wuxuu u adkeysan karaa culeyska korantada ee sarreeya, waxaa laga dhigi karaa maro ningax, gacmo iyo alaabooyin kale.
2. Magdhaw aan macdan lahayn, maro silikoon ah oo loo isticmaalo aaladda isku xidhka ee jilicsan ee dhuumaha, silikoon caag ah oo dahaarka galaas waxsoosaarka qaab dhismeedka xaragada silsiladda oo ah maaddada aasaasiga ah ee isku-ballaadhinta dabacsan. Waxay xallin kartaa kuleylka kuleylka qabow ee u dhimaya burburka dhuumaha, maro silicone ah oo leh caabbinta sare ee heerkulka sare, anticorrosion, caabbinta gabowga, dabacsanaanta wanaagsan iyo dabacsanaanta, waxaa si ballaaran loogu isticmaali karaa batroolka, kiimikada, sibidhka, tamarta iyo beeraha kale.
3. Anticorrosion: Silicone caag ah maro fiber dhalada lagu dahaadhay ayaa loo isticmaali karaa lakabka lidka ku ah gudaha iyo dibedda ee loogu talagalay dhuumaha, oo leh waxqabadka xinjirowga wanaagsan iyo xoog sare. Waa shey habboon oo ka-hortagga sunta jirka.
4. Meelaha kale: Qalabka qaabdhismeedka filinka muraayadda ah ee caagga ah ee siligga ah ayaa loo isticmaali karaa dhismaha qalabka wax lagu xiro, suunka xambaara gudbiyaha lidka ku ah heerkulka sare, qalabka baakadaha iyo beero kale.
Maro silica ah ayaa sidoo kale loo qaybiyaa maro hal jilicsan oo silica ah iyo maro laba weji leh, marka lagu daro, waxaa jira heer kul sare oo lagu daaweynayo dharka silica iyo heerkulka qolka lagu daaweynayo marada silica.
Midabka caadiga ah ee dharka gel silica waa vermilion, buluug cawl, madow, caddaan, iyo midabbo kale ayaa sidoo kale la habeyn karaa.
Maro Maro ah, Maro adag Maro adag, Acrylic dahaarka Maro adag Fabric, Aluminized Maro adag, Pu Dahaarka Maro adag Fabric Maro, Maro adag Dahaarka Acrylic,